ရာဇ၀တ်မှု များ နှင့် ဘာသာရေး ထိန်းကွပ်မှု အကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရာဇ၀တ်မှု များ နှင့် ဘာသာရေး ထိန်းကွပ်မှု အကြောင်း
ရာဇ၀တ်မှု များ နှင့် ဘာသာရေး ထိန်းကွပ်မှု အကြောင်း
Posted by ကိုပါကြီး on Sep 16, 2012 in Copy/Paste | 24 comments
တစ်ချို့က ဆိုကြတယ်။ ဘာသာရေးတွေမရှိရင် လူတွေ အထိန်းအကွပ်မဲ့ပြီး ရာဇ၀တ်မှုတွေ ထူပြောလာလိမ့်မယ်လို့လေ။
လူတွေကို အစဉ်အလာ ဘာသာရေးက ရာဇ၀တ်မှုတွေ မကျူးလွန်အောင် ထိန်းပေးနိုင်တယ်လို့တော့ ကိုယ်မထင်ဘူး၊၊
ထောင်ကျတွေမှာ ဘာသာမဲ့ရာခိုင်နှုန်းထက် ဘာသာရှိသူတွေက ပိုတောင်များနေလို့ပါပဲ၊၊
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေနဲ့ အီတလီလို နေရာတွေမှာ ရာဇ၀တ်မှု ထူပြောပြီးတော့ ဘာသာမဲ့ များတဲ့ စကန်ဒီနေးဗီးယန်းတိုင်းပြည်တွေမှာ ရာဇ၀တ်မှု အလွန်နည်းပါတယ်။။
တစ်လောက နော်ဝေ လူသတ်ပွဲကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ အန်ဒရေဟာ ဘာသာရှိ အစွန်းရောက်မျိုးချစ် တစ်ယောက်ဆိုတာကို မမေ့သင့်ဘူး။
နောက်တစ်ချက်က ဘာသာတရားတွေက သူတို့ ခြံစည်းရိုးကို မထိ သေးသရွေ့တော့ သဘောထားကြီးစွာနဲ့ မေတ္တာ တရားကို ဟောနေလိမ့်မယ်။ ထိပါးတယ်ထင်လို့ကတော့ ပိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လက်သည်းတွေ အစွယ်တွေကို မိတ်ဆွေကို ထုတ်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ဘာသာရေးတွေထက် လူတွေကို ခေတ်မီပညာရေးပေးပါ..အတွေးအခေါ်မြင့်တဲ့ သုတ ရသဒဿနစာပေ တွေပေးပါ လူတန်းစေ့ချောင်လည်တဲ့ ဘ၀ကိုသာပေးပါ..လူတွေမှာ ရာဇ၀တ်မှုတွေ နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စာသင်ကျောင်း တံခါးတစ်ချပ် စာကြည့်တိုက်တံခါး တစ်ချပ်ပွင့်ရင် အချုပ်ထောင် တံခါးဆယ်ချပ်ပိတ်တယ် ဆိုတဲ့ အဆိုရှိတယ်။ လူတွေ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးလာတာ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ထူပြောလာတာ အကြောင်းတရားများစွာ ရှိပါတယ်။
ပညာရေးအခြေခံ ကင်းမဲ့လို့ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေးစံနစ်တွေ လမ်းချော်နေလို့ လူမှုရေး စံနစ်တွေက မမှန်ကန်လို့ ဆို တာတွေပါပဲ။ ဒီအကြောင်းတရားတွေ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဆက်စပ်နေတာ အမှန်ပါပဲ။ တစ်ခုကို အစဆွဲထုတ်လိုက်ရင် တစ်ခု ပါလာမှာ အမှန်။
မိတ်ဆွေကို မေးခွန်း ရိုးရိုးလေးတစ်ခုပဲ မေးမယ်။
ပညာရေး စီးပွားရေး မြင့်မားပြီးတော့ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး စံနစ်တွေ မှန်ကန်နေတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းပြည် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနဲ့ ပညာရေး စီးပွားရေး နိမ့်ကျပြီးတော့ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး စံနစ်တွေ လွဲမှားနေတဲ့ နိုင်ငံ တိုင်ပြည် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တစ်ခု == ဒီ နှစ်ခုမှာ ဘယ်နေရာမှာ လူတွေ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်စီးမှုနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ပိုများ နေနိုင်ပါသလဲ။
ဒီနေရာမှာ နည်းတယ်များတယ် ဆိတာ နိုင်းယှဉ်မှုနဲ့ ပြောနေတာ ဆိုတာကို သတိချပ်စေချင်တယ်။ လူတွေ ကိုယ်ကျင့်တရား စင်ကြယ်ပြီးတော့ သီလတွေ အကုန်လုံခြုံ ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာလဲ စိုးစိမျှမရှိဆိုတဲ့ ယူတိုးပီးယား ရွှေခေတ်ကြီးကတော့ စိတ်ကူးယဉ် ဘာသာရေးစာပေတွေထဲမှာ ရှိတာအမှန်ပဲ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာရှိတဲ့ ပရဒိသုဥယျာဉ် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ပဒေသပင်ခေတ်နဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာမှာရှိတဲ့ ဆွေရ်တယုဂ် ဆိုတာ တွေပဲ..။ ဒါတွေက ရှိချင် ရှိခဲ့ဖူးမယ်ဆိုပေမဲ့ အခု လူသားတွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ အလှမ်းကွာလွန်းတော့ ပုံပြင်လို့ပဲ ပြော ရမယ်။ ဒီလို ခေတ်ကာလမျိုးကတော့ ဒီ ကမ္ဘာမျိုးမှာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ပညာရေး စီးပွားရေး မြင့်မားပြီးတော့ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး စံနစ်တွေ မှန်ကန်နေတဲ့ နိုင်ငံ တိုင်းပြည် လူမှုအဖွဲ့အစည်း တွေ မှာ လဲ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ ရာဇ၀တ်မှုကြီးတွေ ရှိတတ်တာ အမှန်ပဲ။ မနှစ်က နော်ဝေးမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လူသတ်ပွဲကြီးဆို ဒါကို ဖေါ်ပြနေတယ်။ မျက်ကန်းမျိုးချစ် အစွန်းရောက် ကောင်လေးတစ်ယောက်က ဒီ ရာဇ၀တ်မှုကို လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူတစ်ယောက်ကြောင့် နော်ဝေးလို တိုင်းပြည်မျိုးက မိမိ သွားနေတဲ့ လမ်းကို မပြောင်းပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက မြန်မာအများစုက ပညာတတ်ဆိုတာကို ဘယ်လို နားလည်နေလဲတော့ မသိဘူး။
Liberal Arts တွေကို သိမှ တကဲ့ပညာတတ် စစ်စစ်လို့ ပြောရမှာပါ..။
တခါတလေ အထူးကု သမားတော်ဆရာဝန်ကြီးတွေမှာ လူမှုဆက်ဆံရေး ခေါင်းပါးနေတာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နည်းတာ ကိုယ်ကျိုးပဲ ကြည့်တာမျိုးတွေ တွေ့ရင် ဒါ ပညာတတ်လားလို့ မေးရမလို ဖြစ်တယ်။
ပညာတတ်တွေ သိအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာ လူသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရသစာပေ ဘာသာရေး ယဉ်ကျေးမှု ဒဿန အတွေးအခေါ် သမိုင်း မနုဿဗေဒ လူမှုဗေဒ ဘောဂဗေဒ စိတ်ပညာ စတာတွေကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်..။
ဒီ အသိတွေ အရင်ရှိမှ အသိကနေ ခံယူချက်ဖြစ်အောင်ပြောင်း ယူနိုင်မယ်။ ခံယူချက်ကနေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှု ဖြစ် အောင် ပြောင်းယူနိုင်မယ်။ လက်တွေ့ကနေ အသိတွေကို ပြန်ပြီး အထောက်အကူ ပြုနိုင်မယ်..။
Knowledge==Attitude==Practice==Feedback ဆိုတဲ့ စက်ဝိုင်းကို လေ့လာကြည့်ရင် အသိဥာဏ်ဟာ ထိပ်ဆုံးကပဲ။ ဘုရားရှင်က ဒုက္ခ ဆင်းရဲခြင်းတွေ အားလုံးရဲ့ အကြောင်းမူလ အစ ကို မသိမှု-အ၀ိဇ္ဇာ လို့ ဟောတော်မူခဲ့တာကို သတိရစရာပါပဲ။
လူတွေ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေကြတာ မကောင်းမှုတွေ ကျူးလွန်နေကြတာ အကြောင်းတွေ ရှိတယ်။ နည်းနည်း တွေးကြည့် ကြရအောင်။ ရာဇ၀တ်မှု တွေ ဟာ….
(၁) အသိအလိမ္မာနည်းလို့ ဖြစ်တယ်။
(၂) စီးပွားရေး မပြေလည်လို့ ဖြစ်တယ်။
(၃) လူမှုရေး အဆင်မပြေလို့ ဖြစ်တယ်။
(၄) ဘာသာရေး ကိုယ်ကျင့်တရား အဆုံးအမတွေကို မခံယူနိုင်လို့ ဖြစ်တယ်။
(၅) မလုပ်ရမနေနိုင် အစွဲနဲ့ စိတ်ရောဂါရှိလို့ ဖြစ်တယ်။
(၆) မတန်မရာ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်ကြီးတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
(၇) အစွန်းရောက် ယုံကြည်မှုတွေ အမြင်ကျဉ်းဘ၀ဒဿနတေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
(၈) မမျှတ တဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
(၉) ယိုးယွင်း ပျက်စီးနေတဲ့ တရားစီရင်ရေးစံနစ်တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
(၁၀) တီဗီ မီဒီယာ စတာတွေကနေ အမူအကျင့်ကူးစက်ခံရလို့ ဖြစ်တယ်။
(၁၁) လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ရင်းမြစ် ရှားပါးလာမှုကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်။
(၁၂) ပညာမဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ လူငယ်ထု ကြီးထွားလာလို့လဲ ဖြစ်တယ်။
(၁၃) ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှု လွန်ကဲလို့လဲ ဖြစ်တယ်။
(၁၄) မလုံခြုံတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လဲ ဖြစ်တယ်။
(၁၅) မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဥာဏ်နည်းစေတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
ဒီ အကြောင်းတရားတွေရဲ့ စာရင်းကို ပြုစုရင်တော့ ဆုံးနိုင်မယ် မထင်ပါ။ လောကမှာ ဗုဒ္ဓတို့ ခရစ်တော်တို့ ပွင့်ခဲ့ တာတောင် ဒီ ပြဿနာတွေကို အကုန် မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး။
ဘယ်ဘုရား ဘယ်ဘာသာရေးကမှလဲ အကုန်အစင် ရှင်းပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ခေတ် အဆက်ဆက် လူသားတွေက ပဲ ကိုယ် ရှင်သန်နေဆဲ ခေတ်ကာလ ၀န်းကျင်နဲ့ နောင် အနာဂတ်ကို ကောင်းသထက် ကောင်းအောင် လုပ်ကြရမှာ။ ပြဿနာဆိုတာကတော့ လူနဲ့ အတူ အမြဲရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ပြဿနာတွေရဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို ရှာဖွေပြီး လက်တွေ့ကျကျ ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်မဲ့ နည်းလမ်း ရေတို အတွက် သာမက ရေရှည်အတွက်ပါ ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်း ရာဇ၀တ်မှု တွေရှိ နေတယ်ဆိုပေမဲ့ ဆိုမာလီယာကို ရွေးမလား ဂျပန်ကို ရွေး မလား ဆိုရင် တော့ မိတ်ဆွေတို့ရေ…ဘယ်လို ဖြေမလဲ။
View all posts by ကိုပါကြီး →
အစွန်းတရား ၂ ပါးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ
ဘာသာရေး အသိ မရှိခြင်း နှင့် အစွန်းရောက် ဘာသာရေ အသိ ရှိခြင်း
ပညာမဲ့ခြင်း နှင့် အစွန်းရောက် ကိုယ်ကျိုးကြည့် ပညာတတ်ခြင်း တို့ ကင်းဝေးပြီး
မျှမျှတတ သိ ကျင့် နိုင်ကြပါစေ
ကိုယ်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမကို ဘယ်အတိုင်းအတာထိ နားလည် လက်ခံ လိုက်နာ ကျင့်သုံးသလဲဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတိုင်းလည်း အားလုံးဟာ ဘာသာရေးအသိဥာဏ် တပြေးညီ ရှိကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ။
ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာကို ဘယ်လောက်အထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကိုးကွယ်လိုက်နာကြသလဲဆိုတာကိုလည်း လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီရာစုနှစ်ထဲမှာပဲ.. ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရားတွေ.. ဒီကမ္ဘာကြီးက.. ကွယ်ပြောက်သွားမယ်.. ထင်မိတယ်..
ဟယ် သူပြန်လာပြီ ချိုင်းထောက်ကြီးနဲ့ အဲလေ ယောင်လို့ ကိုပါကြီးပါလား။ မန်းဂေဇက်ထဲတောင် မတွေ့တာ အတော်ကြာနေပြီ။ ကျုပ်လဲ မအားလို့ ခုမှဝင်လာတာနဲ့ ခင်ဗျားဆောင်းပါးလေး တွေ့လို့ ဆွေးနွေးချင်တယ်။ နည်းနည်း မေးလို့ ရမလား မသိဘူး။ ကိုပါကြီးကိုယ်တိုင်ရေး ဆိုတော့ ဖြေနိုင်မယ် ထင်လို့ပါ။
ကဲ ဆောင်းပါးရှင် ကိုပါကြီးရေ
ခင်ဗျားဆောင်းပါးလေးက ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းမယ့်စာမျိုးလို့ ထင်လို့ မေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဖြေပေးပါ။ ခင်ဗျား ကွန်ပျူတာ သုံးရင်ပေါ့။ တခါတလေ ကွန်မန့်ချက်ချင်း ပြန်မပေးနိုင်ပေမယ့် ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကတော့ ကွန်မန့်အားလုံး ရတာသေချာပါတယ်။ နောက်ပြီး ခင်ဗျား ဟိုတလောက ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရေးဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတုန်းက ဆွေးနွေးပေးဖို့ နှစ်ခါတောင် သူကြီးဆီမှာ တောင်းဆိုဖူးတော့ ခင်ဗျားဟာ ဆွေးနွေးတာကို ကြိုက်တယ်လို့ ထင်တယ်။ နောက်ပြီး ပို့စ်ပိုင်ရှင်က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးရမယ် ဆိုတာ ဒီဆိုက်ဒ်ရဲ့ စည်းကမ်းဆိုတာ လူ့အခွင့်အရေးသမား တော်တော်များများတောင် လက်ခံကြပါတယ်။
ခင်ဗျားရေးတဲ့ ပထမစာပိုဒ်က လူတွေကို ဘာသာရေးက ရာဇဝတ်မှု မကျူးလွန်အောင် ထိန်းပေးနိုင်တယ်လို့ ခင်ဗျားမထင်ဘူးလို့ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ အနှစ်ချုပ်က ဘာသာရေးဟာ လူတွေကို ရာဇဝတ်မှု မကျူးလွန်မိအောင် ထိန်းပေးဖို့ လုံးလုံး အသုံးမဝင်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ခင်ဗျား တကယ် အဲဒီလို ယုံကြည်သလား ?။ သေချာအောင် မေးတာပါ။ တကယ်တော့ စာထဲမှာကိုက သေချာပြီးသားပါ။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျား ယုံကြည်ရာကို ပြန်ဖြေပေးပါ။ မဖြေသေးရင် ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ကျုပ်က ၂ ကြိမ် ၃ကြိမ် ထပ်မေးပါမယ်။ မဖြေရင် ကျန်တဲ့သူတွေက ခင်ဗျားကို ကိုယ်ရေးတဲ့စာတောင် ကိုယ်ပြန်တာဝန်မယူ နိုင်ဘူးလို့ ထင်သွားလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို သူကြီးတောင် ခဏခဏ ကွန်မန့်ပေးတာပါ။ သူတောင် ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို လေးစားပုံရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်လည်း ပညာယူချင်လို့ပါ။
ဆွေးနွေးတာလည်း ၂ရက်လောက် ရှိသွားပါပြီ။ ကွန်ပျူတာပဲ မသုံးဖြစ်လို့လား မသိ ပေါ်မလာ အတော်ကြာ ဆိုသလို မလာတော့ပါ။ အမှန်တော့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုဖူးလို့ လာပြီးဆွေးနွေး ပေးတာပါ။ မကြောက်ပါနဲ့။ တပ်မတော်က မိုးပေါ်ထောင် ပစ်တာပါ။ တည့်တည့် မပစ်သေးပါဘူး။
နောက်ပြီး သူကြီးပြောသလိုဆို ခင်ဗျားက ရှေးစွန်းစွဲဝါဒက လွတ်မြောက်သူ တယောက်လို့ ထင်လို့ပါ။ အခုတော့လည်း ကြောက်တတ်သလိုပဲ။ ကဲ ဒီတော့ ဆောင်းပါးရှင်က ဆွေးနွေးဖို့ ထွက်မလာရင်လည်း ကျနော်က မေးထားကြောင်း နှစ်ကြိမ်မြောက် ထပ်ပြောပါမယ်။ မလာလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သုံးကြိမ်မြောက် မေးလို့ နည်းနည်းလေးမှ မပြန်ဘူးဆိုရင် စာဖတ်သူတွေကို သက်သေထားပြီး ခင်ဗျားပို့စ်တွေကို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် တာဝန်မယူနိုင်ဘူးလို့ ကြေညာပါမယ်။ မပူပါနဲ့ ကျနော့် အတွင်းစိတ်ရဲ့ အသိအရ စောင့်ဖတ်နေသူတွေ ရှိပါတယ်။ လက်တို့တောင်းရင် ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ ဟဲ ဟဲ။
နောက်ပြီး စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတွေကို တခုပြောချင်တာက မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ အယူအဆကို မြင်လိုက်တာနဲ့ စွပ်ပြီး brilliant post တို့ဘာတို့ မပြောခင် အရင်မေးကြည့်ပါ။ တချို့က ခပ်တည်တည် ရေးပေမယ့် အယူအဆတွေ မမှန်တတ်ပါဘူး။ ကျနော့်အထင် ဒီဝါဒကို မိုးပြာဂိုဏ်းဝင်တွေ ခဏ ခဏ ပြောတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
ကဲ ကိုပါကြီးက ဘယ်လိုခေါ်ခေါ် မလာတဲ့အတွက် ကျနော်ကပဲ ဒီဆောင်းပါးကို ဖြေပေးရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့အမှားတွေကိုလည်း ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ တော်တော့်ကို စိတ်ညစ်စရာပါ။ တစ်အချက်က အောက်က uncle gyi ပြောတာမှန်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာရှိနဲ့ ဘာသာမဲ့ အရေအတွက်ဆိုရင် ဘာသာမဲ့က သိပ်နည်းပါတယ်။ လူမှန်သမျှ တခုမဟုတ် တခုတော့ ကိုးကွယ်တာ များပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဟိန္ဒူ ဘာသာကြီးလေးခုအပြင် နတ်ကိုးကွယ်မှု ဇိုးရိုးအက်စတားဘာသာ အိုအများကြီးပါပဲ။ ဘာသာမဲ့က လူဦးရေအချိုးနဲ့ ကြည့်ရင် မရှိသလောက် နည်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ထောင်ကျထဲမှာ ဘာသာမဲ့နည်းတာ လုံးဝကို မဆန်းပါဘူး။ နောက်တချက်က သူကြီးပြတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေကို သတိထားပြီးကြည့်ပါ။ ဒါက သူ့အကျင့်ပါ။
ဘာသာမဲ့ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ လူနည်းစုကလည်း တကယ်တော့ ပညာနဲ့ စီးပွားရေး အဆင့်အတန်း အတိုင်းအတာ တခုအထိ မြင့်နေသူတွေ များပါတယ်။ ဒီတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့ အတွက် သူတို့မှာ ဘာမှအကြောင်း သိပ်မရှိပါဘူး။ နဂိုကမှ မရှိသလောက် နည်းရတဲ့အထဲ ရှိတဲ့လူကလည်း အဆင့်အတန်း မြင့်သူတွေဆိုတော့ ဘာမှအကြောင်း မရှိပဲ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှု မရှိတာပါ။
နောက်တခုက ဒီကိုပါကြီးပြောတဲ့ အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ ဘာသာရေးမရှိရင် လူတွေ အထိန်းအကွပ်မဲ့ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်မယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါဆို တချို့လူတွေ ဒီလို အထိန်းအကွပ် ရှိသားနဲ့ ဘာလို့ ပြစ်မှုကျူးလွန်တာလဲ။ ဒါဆို အသုံးမဝင်ဘူးပေါ့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောပါတယ်။ ဒါဆို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဥပဒေတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပဒေမရှိတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ ကျနော်တော့ မကြားဖူးသေးဘူး။ နည်းနည်းတော့ နည်းစနစ်ခြင်း ကွာနိုင်တယ်ပေါ့။ ဥပဒေတွေရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က လူတွေကို ဘာပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်ရင် ဘယ်လိုအပြစ်ပေးမယ် ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။ အဓိကကတော့ လူတွေ အလွယ်တကူ ပြစ်မှုမကျူးလွန်အောင် ခြောက်ပြီး ထိန်းထားတာပါ။ ဒီလိုဆို နိုင်ငံတိုင်းက အကျဉ်းထောင်တွေမှာလည်း ရာဇဝတ်သားတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဆို ပြစ်မှုတွေ ရှိနေမှတော့ ဥပဒေတွေက အသုံးမဝင်ဘူး။ လူတွေက မလိုက်နာလို့ ဖျက်ပစ်လိုက်လို့ ဆိုရင် ဘာဖြစ်မယ် ထင်သလဲ။ အမယ်လေး ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့ဗျာ။ ဥပဒေတွေရှိလို့ ဒီလောက်နဲ့ သက်သာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအခိုက်အတန့် ပျက်သွားတဲ့ အချိန်မျိုး ဥပမာ စစ်ကာလတွေမှာ ဆိုရင် လူတွေရဲ့ ဆိုးယုတ်တဲ့ အတွင်းသဘောတွေ ပေါ်လာတတ်တယ် ဆိုတာ ဒီသဘောပါ။ ကြောက်စရာမှ မရှိတော့ပဲကိုး။
ဘာသာရေးဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ လူတွေကို အလွယ်တကူနဲ့ အပြစ်မလုပ်နိုင်အောင် ထိန်းပေးထားတာပါ။ အများစုက နောက်ဘဝတို့ ဘာတို့ယုံတော့ ကိုယ်နောက်ဒုက္ခရောက်မယ် ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ ရှိ မရှိကို ကျနော်မငြင်းသေးဘူးနော်။ ဒီတော့ လက်ရှိလူလောက အတွက် အကျိုးမယုတ်ပဲ အကျိုးရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီစာပိုဒ်က ကိုပါကြီးရဲ့ အယူအဆကို ဖျက်ပစ်လိုက်တာပါ။ ဆွေးနွေးလိုသူရှိရင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာက အသက်ပါ။
နောက်ပြီး တခုပြောချင်တာက ဒီကိုပါကြီးဆိုတဲ့ စာရေးသူဟာ အမြဲတမ်း ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာတွေ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ပို့စ်တွေကို စနစ်တကျဖတ်ပြီး နည်းနည်းမေးကြည့်ပါ။ စွပ်ပြီး မချီးကျူးပါနဲ့။ ကဲ ကိုပါကြီး ဟိုတလောက ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းမှုနှင့် မြန်မာတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအရေးဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတုန်းက ခင်ဗျား မနေနိုင် မထိုင်နိုင် သူကြီးဆီတောင် သွားပြီးကွန်မန့်ဘောက် ဖွင့်ပေးဖို့ ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုနေတုန်းက ဘာလို့ ကျနော် ဝင်မဆွေးနွေးသလဲ သိလား။ ခင်ဗျားရဲ့ ဦးဆုံးစာပိုဒ်မှာတင် Augn Kyaw Mo ရဲ့ facebook စာမျက်နှာမှ ကူးယူထားပါသည်။ ပင်ကိုယ်ရေး မဟုတ်ပါလို့ ရေးထားလို့ပဲ။ အငြင်းအခုန် ဖြစ်နိုင်တာမျိုး ရေးပြီး အဲဒီလို ခေါင်းရှောင်လို့ လာမဆွေးနွေးတာပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုမျိုးဆို ကျန်တဲ့လူတွေက မဆွေးနွေးခင် ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ သဘောထားကို အရင်မေးပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် တာဝန်မယူပါဘူး။ အခုလဲ ခင်ဗျားဆွေးနွေးချင်ရင် အဲဒီစာကြောင်းကို ဖျက်ပစ်ပြီး ခင်ဗျားဘယ်ဟာတွေကို သဘောတူတယ် ဘယ်ဟာကို မတူဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလေးပြောပါ။ လာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း အဲဒီ Aung Kyaw Mo ဆိုသူကို ခင်ဗျားခေါ်လာခဲ့ပါ။ ခင်ဗျားနဲ့ အောင်ကျော်မိုးဟာ တယောက်တည်းလား တယောက်စီလား ဆိုတာတော့ ကျနော်မသိပါဘူး။ ခင်ဗျားဟာ သိပ်လဲ မရှက်တတ်ဘူးလား မသိပါဘူး။ အမှန်တော့ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူရတယ်။ ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေက ကျုပ်ပြောတာ မယုံရင် အပေါ်က သူ့ကလောင်နာမည်ကို ကလစ်နှိပ်ကြည့်ပါ။ recent posts တွေကျလာလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ပို့စ်ပါ။ သူကြီးရဲ့ တိုးတတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ ဆရာတွေလဲ အမှန်တော့ ကျုပ်အနေနဲ့ သိပ်အထင်မကြီးပါဘူး။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်မယူတတ်လို့ပါ။
ဖတ်လို့ကောင်းပါသည်။ root causes တစ်ချို့ တော့တွေ့ပြီ၊ long term short term solutions လေးတွေပါ တင်ပြပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ သိရတာပေါ့ဗျာ။ ကျေးကျူးပါ။
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ဟိုဘက်ပို့ စ်တွေမှာတွေ့ လို့ လက်ဆော့ 
ရှေ့ လျောက်လက်ကမြင်းလို့ ရဘီ :smile:
သောက်ကျိုးနဲ ဒါကျတော့ မရပြန်ဘူး
ညံ့ ပါ့ 
လုပ်ကြပါဦး သိတဲ့ လူကူဆော့ ပေးပါဦး
ကိုပါကြီးတော့ ကော်ပီအကူးကောင်းပြီး.. ဒုက္ခတွေ့နေပြီမှတ်ပါတယ်…။
.. သေချာဖတ်ရင်..အောက်ဆုံးမှာ ခရက်ဒစ်ပေးထားတဲ့လင်ခ်ကလေးတွေ့မှာပါ…။
ဆိုတော့.. အဲဒီဖေ့စ်ဘုတ်မှာအောက်ကအတိုင်း သွားရေးပေးလိုက်ပါတယ်..။
စာရေးသူခင်ဗျာ… အခုအပေါ်ကစာတွေကို.. https://myanmargazette.net/148934/ မှာတယောက်ယောက်က လာကူးတင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်..။ ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားသလား.. မသိရပါ..။ မတောင်းထားရင် ခွင့်ပြုစေလိုပါတယ်..။ အဲဒီမှာ တချို့ဆွေးနွေးနေကြတာလည်း ရှိပါတယ်..။ စိတ်ဝင်စားမယ်.. အချိန်ရမယ်..အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်.. ဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်းပါခင်ဗျား.. ( – Admin – Mandalay Gazette
ကျုပ်က.. အချက်အလက်တခု အင်တာနက်ကရှာပြီး ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ ရွာသူားများ.. သိသာစေယုံ ပြောတာဖြစ်ပါကြောင်း..
Atheism Rare Among Prison Population
Nov 22, 2009 – atheists, beingamoderate proportion of the USA population (about 8-16%) are disproportionately less in the prison populations (0.21%).
Atheists Supply Less Than 1% Of Prison Populations, While …
Nov 30, 2010 – Atheists Supply Less Than 1% Of Prison Populations ————————————————– It’s suprising how many people say to me, “You’re.
ကိုးကွယ်ရာဘာသာရှိသူ ဆိုတာနဲ့ မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာကို အမှန်တကယ်ကိုင်းရှိုင်းသူဆိုတာ အများကြီးကွာခြားပါတယ်။
စာရွက်စာတမ်း တခုခုထဲမှာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတခုအမည်ကို ဖေါ်ပြရုံနဲ့ အဲဒီဘာသာကိုတကယ်ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းတယ်လို့ လုံးဝ မပြောနိုင်ပါဘူး……..
ဆိုတဲ့ အထင်အမြင်ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးရရင်
ထောင်ကျတွေထဲမှာ မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကိုင်းရှိုင်းသူ ရာနှုံးနဲ့
မည်ကာမတ္တဘာသာရှိ+ဘာသာမဲ့ ရာနှုံး ဘယ်ဟာ များတယ်ထင်ပါသလဲ ?????
အခုကွန်မင့်ကိုဖတ်ရတဲ့ စာဖတ်သူပရိတ်သတ်ကြီးရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ?????
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့အမြင်တစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်… မှန်မှန်မှားမှား ကျွန်တော့်အမြင်သက်သက်ပါ…
ဘာသာတစ်ခုခုကို ကိုးကွယ်သူလို့ဆိုကြရာမှာ… အပိုင်းနှစ်ခုကွဲပါတယ်…
ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်၊ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်၊ မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်… သာမာန်အဆင့်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ အဆင့်မြင့်ကိုးကွယ်မှုပေါ့ဗျာ…
သာမာန်အဆင့်ကိုးကွယ်မှုမှာ တရားတော်တွေရဲ့ အပေါ်ယံပိုင်းကိုသာသိပြီး… တချို့သောပညတ်ချက်များကိုလိုက်နာပြီး… တချို့သောပညတ်ချက်တွေကို လိုက်နာချင်မှလိုက်နာမယ်… အဲဒီတော့သာမာန်အဆင့်ကိုးကွယ်သူပေါ့…
အဆင့်မြင့်ကိုးကွယ်သူကတော့ မိမိဘာသာရဲ့ဆုံးမမှုတွေကို သေချာလိုက်နာပြီး ကျင့်စင်တွေကိုလဲလိုက်နာကျင့်ကြံသူပေါ့…
အဲဒါဆိုရင် အဆင့်မြင့်ကိုးကွယ်သူနဲ့ သာမာန်အဆင့်ကိုးကွယ်သူ ဘယ်သူပိုများလိမ့်မလဲ…
အဲဒီမှာ တကယ်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေပြည့်စုံမှုကို ထည့်တွက်ရပါမယ်…
ပညာရေး စီးပွားရေး နိမ့်ကျမှု၊ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး စံနစ်တွေ လွဲမှားမှု
အဲဒီအချက်တွေမပြည့်စုံဘဲ… ဘာသာရေးဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း Crime Rate ကိုလျော့ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး…
ဗမာစကားပုံရှိပါတယ်… “အူမတောင့်မှ သီလစောင့်နိုင်မယ်တဲ့”…
အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခေါ်အဝေါ်အရ… ပုထုဇဉ်လူသားများအများစုရှိသော ဤကမ္ဘာမြေလောကကြီးအား…
ဘာသာရေးထိန်းကွတ်မှုဖြင့် Crime Rate လျော့ချဖို့ထက်… ပိုမိုလက်တွေ့ဆန်သော… ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုစံစနစ်တွေကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်သာ မြှင့်တင်နိုင်မယ်လို့ တင်မြင်ပါကြောင်း…
အပြန်အလှန်.. Respect ထားပြီး.. စိတ်ထိန်းပါဦး.. ။ :buu:
သဂျီးရေ… ကျွန်တော် နားလည်သလောက်ပြောမယ်နော်………
အခုတင်ထားတဲ့ပို့ စ်က အဲ့ဒီအချက်နဲ့ ညှိနေသလားလို့ …………..
ဒီပို့စ်ဟာ… ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်စလင်၊ ခရစ်ယာန်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမုန်းပွားအောင်…ရေးတာတာမဟုတ်ကြောင်းနှင့်
လက်တွေ့အခြေအနေပေါ်တွင်… ဘာသာရေးနှင့် လူ့အဆင့်အတန်းယဉ်ကျေးမှုကို ညီမျှခြင်းချကြည့်ထားသော
အယူအဆတစ်ခုကို ရေးသားထားခြင်းဟုသာ သတ်မှတ်ရနိုင်ပါသည်…
ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအစွန်းရောက်အမြင်ဖြင့်မကြည့်ကြပါနှင့်ဟု… မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်…
အမှန်တော့ ဒီပို့စ်က စည်းကမ်းချက် နံပါတ် ၆ နဲ့မညိပါဘူး။ စည်းကမ်းချက်အရ ဘာသာအချင်းချင်း အမုန်းပွားစေနိုင်တဲ့ စာမျိုးမှသာ စည်းကမ်းနဲ့ မညီတာပါ။ အခုဟာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေရုံပါ။ ဘယ်ဘာသာလို့ ရေးမထားပေမယ့် အများစု ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို ရည်ရွယ်တာ သေချာပါတယ်။ နောက်ဆို စာဖတ်ပရိသတ်တွေက ကိုပါကြီးတို့လို လူတွေရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကို ကွန်မန့်မပေးခင် အရင်မေးကြည့်ပါ။ သူတို့စာတွေက ရေးပြီးလို့ မရှင်းနိုင်ရင် သူရေးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခေါင်းရှောင်တာ အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
နောက်ပြီး ဒီအယူအဆကို တချို့မိုးပြာဂိုဏ်းဝင်တွေ ပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်။ အမှန်တော့ ဒီဆရာတွေရဲ့ အယူအဆတွေကိုလဲ အဲဒီလို ဆွေးနွေးပြီး ဖြည်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ သူတို့ဂိုဏ်းဝင်တွေက နေရာတိုင်းမှာ ပြောင်းပြန်တွေးတဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်။ ဖတ်လိုက်တာနဲ့ သိသာပါတယ်။ ပြောင်းပြန်တွေးတိုင်းလည်း ကျနော့်အမြင်အရ လစ်ဘရယ်ဝါဒသမား မဟုတ်ပါဘူး။
ဟုတ်တယ် . . အဲ့ဒါ . .
အရင်ကလဲ . . ဂလိုဘဲ . . ။